I-Quinta la Montaña Space of Freedom and Nature - I-Airbnb
I-Quinta la Montaña Space of Freedom and Nature
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAlfredo
Intaba yesihlanu, ikunika indawo entle yokuphumla kwimeko yosapho, ekwidolophu yaseSan Jose de las Manzanas eyaziwa ngcono ngokuba yi-tout, uza kwamkelwa nentsapho yakho, abahlobo bakho kunye nesilwanyana sakho sasekhaya ukuze wonwabele indawo entle yenkululeko. Indawo yethu yokuhlala inazo zonke izinto ezenza uthi zava, i-wifi, njl. Siza kuhoya ukucebisa ngeyona ndawo intle oza kuhlala kuyo, siza kukulinda ukuba uzive usekhaya.
Indlu yethu yamaplanga ikwisakhiwo esiyi-2500, kufutshane nomlambo wamanzi asentwasahlobo, kufutshane nendawo enengca enendawo yokukhempisha enebhanka, ukuze wonwabele ubusuku obumnandi, indlu yethu yamaplanga inendawo eyaneleyo yemoto yakho.
4.68 · Izimvo eziyi-75
Intaba yesihlanu, ikwidolophu yaseSan Jose de las Manzanas, ihlathi elimangalisayo, apho ungaphumla khona kwindawo epholileyo, enuka ihlathi le-oyamel ne-cedar, uza kuba kwi-3500 mtrs ukuphakama. Kwimeko yosapho, kumanyathelo nje ambalwa ukusuka apho uza kufumana iivenkile zokutyela ezintle kunye nenye yezona ndawo zinkulu ezithengisa utywala kwiphondo, kwimizuzu embalwa ukusuka apho unokudibana ne-El Centro ceremonial Otomi, idolophu yaseSanta Ana okanye idama laseIturbide, ungahamba ngeenyawo ukuya ehlathini okanye uhambe ngebhayisekile, kule ngingqi kukho iindawo eziliqela zemidlalo yokuzonwabisa.
Siza kukujonge ngamehlo abomvu ukufika kwakho.